နောင်ဂျိန်တို့ မိသားစု: ipad အသုံးတည့်ပုံ
အခုတလော ipad iphone တွေရွဲှ့န္တရာယ် တွေ ပဲ ဖတ်နေရလို့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ လည်း ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
သမီးလေးနဲ့ အိုင်ပက် ပေါ့။
အရင် ဦးဆုံး အိုင်ပက် သုံးပီး သမီးလေး တိုးတက်မှုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
သမီးလေးကို 1 to 10 ကို တခါမှ သေချာ မသင်ပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ youtube ကနေ counting nos , 1,2,3,4,5 သီချင်းတွေနဲ့ သမီးလေးက အလွတ်ရ သွားသလို ကလေးတွေ အကြိုက် ဂဏန်းလေးကို ပုံလေးတွေနဲ့ပါတဲ့ အခါ သမီးလေး အလွတ်ရသွားသလို ၁ ကနေ ၅ အထိ သူမှန်အောင် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်လှေကား တက်တဲ့ အခါမှာ သူ့ကို သမီးလေး ဘယ်အထပ်ကို နှိပ်ပေးပါလို့ ပြောရင် သူ ရွေးချယ်ပေးပါတယ်။ လှေကား တက်တဲ့အခါ သူနဲ့အတူ လှေကားထစ်တွေ ရီပီး တက်ပေးပါတယ်။ ပြောချင်တာက youtube က သမီးလေး ကို စာသင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။
ဒီလိုပါပဲ A, B, C သီချင်းကို သမီးလေး အလွတ်ရသလို အခုအရွယ်လေးနဲ့ A ကနေ z အတွင်း စာလုံးတွေ မြင်ရင် သူက ဒါကို မေမေ abc ဟိုမှာတဲ့..။ အဲဒါ သူ ၂ နှစ်မပြည့်ခင်ထဲက ပြောတာပါ.။
သမီးကို A, B, C ရွေးခိုင်းရင် သူ အေ ကနေ စီ အထိ မှန်အောင် ရွေးနိုင်ပါတယ်။
သမီးလေးဟာ YOUTUBE ကနေ အင်္ဂလိပ် စာလုံးတွေ နားလည်မှုတိုးလာသလို ဂျပန်စာလုံးလေးတွေ လည်း သူ နားရည်ဝနေ ပါတယ်။ မြန်မာလို ကဗျာလေးတွေလည်း YOUTUBE ကပဲ ရပါတယ်။ သမီးလေး ကြိုက်တဲ့ ကဗျာသီချင်းလေးတွေက ရောင်စုံဘောလုံး ၊ ပစ်တိုင်းထောင်၊ သူတို့ဘ၀နဲ့သူတို့တွေ၊ အဘိုးကြီးအို ခါးကုန်းကုန်း၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ မိသားစုလေး တို့ပါပဲ။ အဲလို ကဗျာတွေကို မိခင်တွေ ကိုယ်တိုင် အင်္ဂလိပ် ဂျပန် မြန်မာ အကုန် ကလေးနဲ့ အတူ အမူအယာလေး တူတူလုပ်ပီး လိုက်ဆိုရင် သူတို့လေးတွေ သိပ်သဘောကျပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကဗျာ တော်တော်များများ ရသလို ဂျပန်လို ကဗျာလေးတွေ လည်း သူရနေပါတယ်။ ဒါကတော့ youtube ကနေ ရတဲ့ အကျိုးပါ။
နောက်ပီး သမီးကို ဘာလုပ်စေချင်လဲ။ youtube မှာရှာပီး ကိုယ်တိုင်ဘယ်လို လုပ်တာ ဒါမှမဟုတ် မိဘက ဘယ်လို လုပ်တာကိုပါ ပြပေးရပါတယ်။ ဒါဆို သူတို့က အဲဒါကို မြင်ပီး အတုမြင် အတတ်သင်ကြပါတယ်။
ဒီက ကလေးချန်နယ်မှာလည်း ကလေးတွေ အကျီင်္ ခေါက်သိမ်းတာ အ၀တ်ကိုယ်တိုင်ဝတ်တာ သွားတိုက်တာ အိမ်သာတက်တာ လေးတွေ ပြတာကို ကြည့်ပီး သမီးက ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ချင်တာ များပါတယ်။ ဥပမာ..အခုတလော သမီးလေးက ရှူးရှူးပေါက်တာ အိမ်သာမှာ မသွားလို့ youtube မှာရှာပီးပြရတာပေါ့. အခုတော့ သမီးလေးက အိမ်သာမှာ သွားပါတယ်။ သွှူအရုပ်တွေကို တောင် ရှူးရှုးတည် ပေးတမ်းဆော့ပါတယ်။ အခုတလော ကိုယ်က သွားတိုက်ပေးတိုင်း ငြင်းနေလို့ အဲဒါလေး ရှာပြပေးမှ မအေလုပ်တာ ခံပါတယ်။ သူ ကိုယ်တိုင် အ၀တ်ဝတ်နိုင်သလို ခြေအိတ် ဖိနပ်ဝတ်နိုင်ပါတယ်။ တခါတလေတော့လည်း ပြောင်းပြန်ဖြစ်တာတို့ မှားတာတို့တော့ ရှိတာပေါ့နော်။
သမီးကိုယ်ဝန်နဲ့ တည်းက ကိုယ်တိုင် ဂိမ်းဆော့တဲ့ အကျင့်ကို ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမီးလေးအတွက် educated game လေးတွေ ရှာထားပေးတော့ အခုချိန်မှာ သမီးလေး အတွက် အတော် လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။ colour တွေ shape တွေ တူတာလေးတွေ ဆက်တာ သမီးလေးလဲ ပျော်ရ တခါတည်း သင်ပေးပီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ အခု သမီးကို shape တွေ သင်နေပါပီ။
သမီးက tango, viver, line, skype ကို ကောင်းကောင်းခွဲတတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ ဆိုပီး tango, line, skye မှာ သူကိုယ်တိုင်ရှာပီး ခေါ်တတ်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် လျှောက်ရိုက်တဲ့ ပုံတွေကတော့ သမီးလေး ၁ နှစ်ခွဲလောက်တည်းက ကောင်းကောင်း ကိုင်တတ်နေပါတယ်။
အကျိုးမရှိတာကတော့ မျက်စိပျက်စေမည်။ စွဲလန်းစေမည်ပေါ့။
ဒီတော့..... အချိန်နဲ့ ပေးသုံးပါ။ ပါးစပ်မပိတ်တမ်း ပြောပေးပါ။ ငြိမ်ပီးရော တယောက်တည်း လွှတ်မထားပါနဲ့။
သမီးကို အမြဲ ပေးမသုံးပါဘူး။ သူနဲ့ တူတူသုံးတဲ့ အခါ ကဗျာတွေ တူတူလိုက်ဆိုပေးပါတယ်။ သူတယောက်တည်း ပေးသုံး ဖြစ်တဲ့အခါ တချိန်လုံး နောက်ဆုတ်ကြည့်ဖို့ပြော ရပါတယ်။ သမီးရေ နောက်ဆုတ် မျက်စိပျက်မယ် လို့ အာပေါက်မတတ် ပြောရပါတယ်။ ပြောလိုက်ရင်တော့ နောက်ဆုတ်တာပေါ့. ပီးတော့ ရှေ့ပြန်ရောက်။
သူ အိုင်ပက်သုံးပီး ကိုယ်အလုပ်လုပ်နေပေမဲ့ မျက်ခြေမပျက် ကြည့်နေပေးပါ။ သူဘာတွေ ကြည့်နေလဲ ဘာတွေ လုပ်နေလဲပေါ့။ တခါတလေ သူ့ဘာသာ ဖွင့်တဲ့ အထဲက ကိုယ်က ကောင်းတယ်ထင်တာလေး တွေ မှတ်ထားပီး သူ့ကို ပြန်ပြရတာပေါ့.။ မိနစ်၂၀ တခါတလေ နာရီဝက် ပီးရင် သမီးရေ... တော်တော့ နောက်နေ့မှ ကြည့်လို့ ပြောပါ။ သေချာပါတယ်။ မပေးချင်ပါဘူး။ အဲဒါဆို သမီးရေ..the last လို့ပြောပါ။ ပီးရင်တော့ ငိုလည်း သိမ်းလိုက်ပါ။ အခြားဟာကို အာရုံ ပြောင်းပေးလိုက်ပါ. သမီး မျက်စိ ပျက်မှာမို့လို့ ဆိုတာ ရှင်းပြပေးလိုက်ပါ။
ဒါကတော့ သမီးနဲ့ အိုင်ပက်အကြောင်း တစေ့တစောင်းပေါ့။
Posted by နောင်ဂျိန် at 12:01 PM